Isikhephe kwi-Bush eAgnes Water
Amaphenyana azizindlu sinombuki zindwendwe onguBruce
Iza kusetyenziswa nguwe yonke le amaphenyana azizindlu.
Wamkelekile kwiSikhephe saseQueensland eBush!
Sinikezela ngamava akhethekileyo endawo yokuhlala ngokukumema ukuba uhlale kwisikhephe sethu esitofotofo, sigcinwe ngokukhuselekileyo kwaye sidada kwindawo yethu yeehektare ezingama-40. Uya kuba nomyalelo okhethekileyo wenqanawa kunye nendawo yakho yokutyela yabucala, igumbi lokuhlambela kunye neendawo zokonwabisa.
Indawo yakho yokuhlala eyodwa yimizuzu nje esi-8 ukusuka kumbindi weAgnes Water, iilwandle kunye neevenkile. Ke yiza wonwabele ukusetwa kwethu kwehlathi elizolileyo, ujikelezwe zizilwanyana zasendle kwaye umamele ukugcwala kwamanzi ngelixa usonwabela iglasi okanye ezimbini phantsi kweenkwenkwezi.
4.87 ·Izimvo eziyi-281
4.87 · Izimvo eziyi-281
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi281
I-Agnes Water kunye ne-1770 zidume ngeelwandle zazo ze-surf, ukuloba okumangalisayo kunye nokufikelela lula kwi-Great Barrier Reef. Ukonwabela unyaka wonke ukufudumala, imozulu eshushu, le ndawo inazo zonke iindawo ezinomtsalane zeendawo zokuchithela iiholide ezinkulu kunye neendawo zeeholide kodwa ngaphandle kwezihlwele!
Ubumfihlo bakho buqinisekisiwe kodwa ukuba uyamfuna ngaso nasiphi na isizathu, Bruce, umamkeli wakho umnxeba 24/7.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Round Hill